Enweta uru nke mbak na mgbanwe pasent na nkwụnye ego ọ bụla ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga nke ụlọ ọrụ niile sitere gburugburu ụwa.
Site n'akụkụ ụwa nile United States NMS (NASDAQ) NYQ (NYSE)
Enweta uru ọ bụla ▼
A na-agbakọta ego maka òkè ọ bụla site na nkerisi ego (ma ọ bụ uru) na ọnụahịa nke ụlọ ọrụ.
Gbanwee maka afọ %
1. Toyota Motor Corporation nkwụnye ego kwa òkè
2. ORIX Corporation nkwụnye ego kwa òkè
3. KB Financial Group Inc. nkwụnye ego kwa òkè
4. Brookfield Property Partners L.P. nkwụnye ego kwa òkè
5. Shinhan Financial Group Co., Ltd. nkwụnye ego kwa òkè
6. Koninklijke Philips N.V. nkwụnye ego kwa òkè
7. Honda Motor Co., Ltd. nkwụnye ego kwa òkè
8. SK Telecom Co., Ltd. nkwụnye ego kwa òkè
9. Tata Motors Limited nkwụnye ego kwa òkè
10. Vedanta Limited nkwụnye ego kwa òkè
11. ING Groep N.V. nkwụnye ego kwa òkè
12. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. nkwụnye ego kwa òkè
13. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. nkwụnye ego kwa òkè
14. News Corporation nkwụnye ego kwa òkè
15. Nomura Holdings, Inc. nkwụnye ego kwa òkè
16. Mizuho Financial Group, Inc. nkwụnye ego kwa òkè
17. Banco Santander, S.A. nkwụnye ego kwa òkè
18. KT Corporation nkwụnye ego kwa òkè
Inwe ego site na ebuka - nke a bụ isi ihe na-egosi ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe ị na-azụta mbak, ndị na-etinye ego na-etinye ego na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, yana ụlọ ọrụ ahụ, na-enweta uru, na-egosi ego ole ekesarala n’otu òkè.
Ọrụ anyị "nzi ndị si n'ọtọtọ ụwa" allstockstoday.com na-anakọta ma gbakọọ ụdị ndị ahụ:
Na-enweta ego sitere n'ọtọ nke ụlọ ọrụ n'ịntanetị
Uru ndi mmadu ahia taa
Gbanwee ego ị na-enweta kwa ụlọ ọrụ ugbu a
Ọnọdụ akụ na ụba nke uru ụlọ ọrụ dị ka atụnyere n'afọ gara aga
Datebọchị ụlọ ọrụ na-akọ akụkọ banyere uru. Bọchị ikpeazụ maka taa.
Onu ogugu nke uru n’otu n’ime ụlọ ọrụ
Gbanwee na uru ngwaahịa maka afọ
Uru Ntanetị Na Ntaneti
Inweta ego sitere na oke nke ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị - njirimara sitere na isi mmalite ọha na eze na nkwupụta ego nke ụlọ ọrụ.
Uru site na mbata ụlọ ọrụ ahụ bụ uru nke ego a gosipụtara maka ụlọ ọrụ na akwụkwọ ndekọ ego. Ekwela ka uru ọghọm nke ụlọ ọrụ were nweta uru site na mgbanwe dị na ọnụahịa nke ebuka ụlọ ọrụ na ahịa ngwaahịa.
A na-ebipụta ego sitere na mbak nke ụlọ ọrụ otu oge n’oge akuko, dịka iwu, nke a bụ nkeji ụzọ nchịkọta ego. Dabere na iwu obodo nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, oge igosipụta uru ụlọ ọrụ nwere ike ịdị iche.
Abamuru nke uru nke ụlọ ọrụ ụwa taa bụ ọrụ nchịkọta saịtị anyị nke ị nwere ike ịhụ uru kachasị ọhụrụ (maka oge mkpesa ikpeazụ).
Inwe ego kwa otu - nke a bụ ego ọrụ ụlọ ọrụ kere site na ọnụọgụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a nwere.
Ya mere, uru ụlọ ọrụ bara uru na òkè ọ bụla bụ egosiri na uru ego a na-enweta na etinye ego.
Inwe ego kwa otu oge taa bụ ihe ngosi dabara adaba nke iji atule arụmọrụ nke ụlọ ọrụ dị iche iche n'otu oge ego.
Mgbanwe ego ndị ụlọ ọrụ na-enweta kwa otu ugbu a na-egosi nha nke ihe ego ụlọ ọrụ nwetagoro ugbua atụnyere ihe ọ bụ n'afọ gara aga.
Mgbanwe ego a na-enweta n’ụlọ ọrụ n’otu òkè ka egosiri dịka pasent. Ọ bụrụ ngbanwe ego a na-enweta kwa òkè karịrị afọ gara aga, mgbe ahụ egosiri na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụrụ na ego enwetara na otu taa bụ ihe na-erughi ọnwa iri na abụọ gara aga, ọnụọgụ ahụ na-egosiputa ọbara ọbara
E jiri ya tụnyere afọ gara aga, ịdị omimi nke uru ngwaahịa ụlọ ọrụ bụ otu n'ime njiri mara ụlọ ọrụ nke ọma.
Ọ bụghị naanị uru uru bara uru na-egosi na ọrụ ụlọ ọrụ dị mma. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ nwere ike igosi obere uru na ego, mana nwekwuo isi ego site na ịzụta mbak ma ọ bụ ịzụta ngwongwo na mmepe.
Ọnọdụ ego nke ụlọ ọrụ na-enweta site na òkè ọ bụla na-egosi naanị ego sitere na nkwupụta ego ahụ, na-ewepụ akụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ka o sina dị, uto dị omimi nke uru site na afọ ruo n'afọ na-egosi ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu ma na-abawanye ọnụ.
Ofbọchị akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ ahụ nwetara na uru, ụbọchị ikpeazụ nke akụkọ ahụ bụ uru ntụle aka, ụbọchị nke egosiri na akụkọ ego banyere uru ụlọ ọrụ ahụ n'ihu ọha.
A na-edobe ụbọchị nkwupụta ego n ’ụlọ omebe iwu nke obodo ebe ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Mana ụlọ ọrụ n'onwe ya nwere ike ịgbanwe ụbọchị nke mkpesa uru ikpeazụ gbasara n'ime oke nke iwu siri ike.
Maka njiri mara ụfọdụ nke ngwaahịa ahịa, oge ụfọdụ ụbọchị nkwupụta uru ụlọ ọrụ nwere ike imetụta àgwà ụlọ ọrụ ahụ.
You nwere ike ịhụ ụbọchị akụkọ mkpesa maka ụlọ ọrụ ọ bụla na ọrụ “ngwaahịa uru” anyị.
Onu ogugu nke uru site na ulo oru
Ego ole ndị ụlọ ọrụ kwụrụ maka ụlọ ọrụ ngwaahịa ụlọ ọrụ ụwa niile ka egosiri na kọlụm nke nchịkọta ngwaahịa ahịa anyị.
A na-agbakọ ọnụ ahịa uru dị ka uru ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, nkewa site na ọnụ ọgụgụ nke ndị mbak.
A na-ahazi ndenye aha ndabara na-ekere òkè na nke kacha nta rue ntakịrị. N'ihi ya, ị na-ahụ ozugbo kacha elu uru n'otu ụlọ ọrụ òkè.
Mgbanwe na uru ngwaahịa maka afọ bụ atụmatụ nke ego enwetara na otu òkè maka taa ka ego a na-enweta kwa otu maka afọ gara aga.
Mgbanwe nke ego enwetara na òkè kwa afọ ga-egosi n’ihu ikpeazụ nke tebụl anyị.
Egosiputara odi nma nke ihe enwetara n’otu uzo ka egosiputara n’ihe ogugu.
Ego na-adịghị mma kwa òkè, n'otu n'otu, ga-acha ọbara ọbara.
Mgbanwe a na-enweta na ego ụlọ ọrụ maka otu afọ bụ njirimara ogologo oge nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ dị mkpa ịghọta na nnukwu ụlọ ọrụ na-ere òkè ha na mgbanwe ahịa, dịka iwu, na-eleba anya na nkwupụta kwa afọ nke uru na atụmatụ azụmaahịa ha.